अदालतमा अचम्मको उजुरी ! ‘मेरी बूढी नुहाउँदै नुहाउँदिन, डिभोर्स चाहियो’ - Dna Nepal
अदालतमा अचम्मको उजुरी ! ‘मेरी बूढी नुहाउँदै नुहाउँदिन, डिभोर्स चाहियो’
११ माघ २०७५, शुक्रबार ०२:५७
एजेन्सी, माघ ११ ।
भारतको बिहारमा रहेको मसौढीमा एक पतिले पत्नीमाथि अनौठो आरोप लगाएर डिभोर्सको निवेदन दिएका छन् । पतिका अनुसार, पत्नी नुहाउँदा पनि नुहाउँदिन अनि कपाल पनि धँुदिन । उसको शरीरबाट दुर्गन्ध आउँछ र सँगै बस्नै सकिँदैन । पतिले जति सम्झाएपनि पत्नीले कुरा नसुनेपछि कुटपिट गरेर घरबाट निकाले ।
पीडित पत्नीले महिला आयोगमा उजुरी दिएपछि वैवाहिक सम्बन्धमा सरसफाइको मुद्दा पहिलोपटक आयोगसमक्ष आयो । आयोगले नोटिस पठाएपछि मंगलवार पति आयोग पुगेर पत्नीको शरीरबाट दुर्गन्ध आउने कुरा सुनाए ।
पतिले भने, ‘ऊ लामो समयसम्म नुहाउँदिन र ननुहाएकाले उसको कपालमा जुम्रा परेको छ । नुहाउनका लागि श्याम्पू दिँदा ऊ त्यसले बर्को धोइदिन्छे । अनि ऊ घरको कामकाज पनि गर्दिन ।’
यो जोडीको बिहे एक वर्षअघि भएको हो । बिहेपछि पत्नी फोहोरी बन्ने गर्दा पति चिन्तित थिए । त्यसैले गर्दा उनीहरूबीच प्रायः झगडा र कुटपिट हुन्थ्यो । पतिले भ्रममा पारेर बिहे गरिएको आरोप लगाए ।
पत्नीका अनुसार, उनी माइतमा यसरी नै ननुहाइकन बस्थिन् । महिला आयोगले दुवै पक्षको कुरा सुनेर उनीहरूलाई विवाद समाधान गर्नका लागि एक महिनाको समय दिएको छ । त्यसपछि पनि सुधार नआएमा अर्को कारवाही गरिने आयोगको भनाइ छ ।